Tallaalka Cudurka COVID-19 oo Maanta laga bilaabay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tallaalka Cudurka COVID-19 oo Maanta laga bilaabay Muqdisho
Munaasabadda lagu daah-furayay talaalka COVID19 ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiirka Caafimaadka XFS Fowsiyada Abiikar, Mas’uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda Federaalka, bahda Caafimaadka iyo dadweyne kale.
Wasiirka Caafimaadka Fowsiyada Abiikar ayaa lagu daahfuray talaalka Cudurka COVID19 oo la keenay Soomaaliya sidoo kale waxaa talaalka qaatay xubno kale oo ka tirsan Waaxda Caafimaadka Maamulka Gobolka Banaadir.
Shalay ayaa waxaa Magaalada Muqdisho soo gaaray qeybtii kowaad ee talaalka COVID19 oo noociisu yahay Oxford/Astrazenica, isla markaana loogu tala-galay inay qaatan illaa iyo 300,000 oo qof.
Wasaaradda Cafimaadka XFS ayaa u mahadcelisay cidwalbo oo ka qeyb qaadatay in dalkeena lasoo gaarsiiyo talaalka cudurka deg degta u faafi ee COVID19.
Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay Dacwadda Badda, xili lagu…